ဘုန်းကျော်: နိုင်ငံရေးသမားတွေ မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်ဖို့ ပါ
၁ ခုကျန်သေးတယ် တတိယနိူင်ငံကနေ ကီးဘုတ်ကိုင်ပြီး ဘီယာသောက်ရင် ဘ၀င်မြင်းရူးနေတဲ့ အင်တာနက်တော်လှန်းေ၇း သမားတွေ ရဲ့ စိတ်ကူး၇င်တော်လှန်ေ၇းမအောင်မြင်တာပါထည့်ရေပါ.
ဘုန်းကျော် မင်းကို ကွန့်မန့်ပေးရင်ချက်ချင်မတတ်ဘူကွ ဘာလဲမင်းလဲ ပြောချင်တာပြောပြီး သူများပြောတာကျတော့ စာပေကင်ပေတိုင်လုပ်ခြင့်တာလာ မောင်ချောနွယ်ပြောတဲ့စကားရှိတယ် သူများမေးရိုးကို ထိုးဖို့ ကိုယ်မှာလဲ မေးရိုးရှိ၇တယ်တဲ့
ဟုတ်ပါ့ဗျာ.. ဂုံးကျော်ဆိုတဲ့ကောင်က သူများတော့ လီးလချီးမိုးမွှန်အောင်ဆဲပြီး သူ့ပြန်ဆဲမှာစိုးလို့ ကွန့်မင့်တွေကို စိစစ်သေးတာ အဲ့ဒီစောက်ကျင့်တော့ မကောင်းဘူး ငါ့လီး ဂုံးကျော် မင်းအတ္တမများနဲ့ စောက်ကျင့်တွေပြင် မင်းသူများကို မဆဲရင် မင်းဘလော့လဲ ဘယ်ကောင်မှ လာဆဲမှာမဟုတ်ဘူး မင်းလဲ မျက်ချေးမမြင်သေးတဲ့ကောင်ပဲ
ကိုဘုန်းကျော်ရေ ... ခင်ဗျားရဲ့ အရေးနဲ.အတွေးကို ကြိုက်တယ်၊ ဘာမှသွယ်ဝိုက်မနေပဲ ခင်ဗျားရဲ့ ထင်တာတွေ၊ စိတ်ထဲမှာရှိတာတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ချရေးတဲ့ ရေးဟန်ကိုကြိုက်ပါတယ်၊
ခင်ဗျားရဲ့ ဘလော့ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၆လလောက်က လင့်တစ်ခုကရပြီး အမြဲတမ်းလာဖတ်ပါတယ်၊
do not dream another 8888 because u Nay Win created this.if the goverment allow it will happen.Otherwise it will never happen.
အေး ငါလဲမင်းရဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ လက္ခဏာ ကို ခံတွင်းတွေ့လို့ လာလာ ဖတ်နေတာ မင်းအခုလို ဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကောင်းပါတယ် မိုးသီးကိစ္စကတော့ကွာ စောက်ရမ်းတင်းလို့ နည်းနည်း 18+ စာသားတွေနဲ့ ပွားလိုက်တယ်